China Stainless steel ရောနှောကန်များ stainless steel ရောနှောကန်များ ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |ZhiTong
သံမဏိရောစပ်ကန်များ stainless steel ရောနှောကန်များ
2.Touch ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းသံမဏိ: ss316L
4. Power supply : သုံးဆင့် 220voltage 380voltage 460voltage 50HZ 60HZ ရွေးချယ်မှုအတွက်
5. ဦးဆောင်အချိန် 10 ရက်
1.Emulsification၊ ရောနှောခြင်း၊ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း၊ ပြန့်ကြဲခြင်းစသည်ဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ပြီးမြောက်နိုင်ပါသည်။
2. အဆိုပါပစ္စည်းကို interlayer ရှိအပူ- conducting ကြားခံအားဖြင့်အပူဖြစ်ပါသည်, အပူသည်တူညီပြီးအပူချိန်ကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
3.အော်ပရေတာဘေးကင်းရေးအတွက် skip stainless steel ပလပ်ဖောင်း။
4.တစ်သားတည်းဖြစ်တည်နေသော ဦးခေါင်းသည် မြင့်မားသော ရှတ်ဝဲဖြစ်သော လက်ရှိ emulsification ရောနှောမှုကို လက်ခံရရှိပြီး အရှိန်နှေးကွေးသော ခြစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် မွှေခြင်းသည် အိုး၏အောက်ခြေနှင့် နံရံတွင် အလိုအလျောက် ကပ်နေလိမ့်မည်။ပစ္စည်းအသေးစား။
5.ပစ္စည်းအား interlayer အတွင်းရှိ အပူအကူးအပြောင်းကြားခံဖြင့် အပူပေးထားပြီး အပူသည် တူညီပြီး အပူချိန်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
6.ရောစပ်ထားသောကန်ကို 120 ဒီဂရီအထိအပူ သို့မဟုတ် အအေးခံနိုင်သည်။
7.လက်ယာရစ်ဘောင်အမျိုးအစား နံရံကို ခြစ်ထုတ်ခြင်း၊ နာရီလက်တံတိုင်ခတ် လှော်တက်မွှေခြင်း အမျိုးအစား၊ ခြစ်စက်သည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အာရုံစူးစိုက်မှုအားကောင်းစေပြီး tetrafluoroethylene ခြစ်စက်သည် အိုးနံရံနှင့် နီးကပ်ပါသည်။
8.အိုးနံရံကပ်ခြင်းပြဿနာကို ထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်ပြီး ထောင့်သေများမထားခဲ့ဘဲ ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းအမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်သည့်ကိရိယာသည် ၎င်း၏အရှိန်ကို မထင်သလို ခြေလှမ်းမဲ့သွားစေနိုင်သည်။
9. တစ်သားတည်းဖြစ်နေသော မွှေခြင်းနှင့် လှော်တက်မွှေခြင်းကို သီးခြား သို့မဟုတ် တစ်ချိန်တည်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ပစ္စည်းပြန့်ကျဲခြင်း၊ တစ်သားတည်းဖြစ်ခြင်း၊ emulsification၊ ရောစပ်ခြင်းနှင့် ရောစပ်ခြင်းကို အချိန်တိုအတွင်း ပြီးမြောက်နိုင်သည်
၁၀။စတီးလ်သုံးလွှာ အိုးကိုယ်ထည်သည် အလယ်အလွှာ၊ အပူလျှပ်ကာအလွှာဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းထိတွေ့မှုအပိုင်းမှာ 316L၊ အလယ်အလွှာမှာ အပူအလွှာ 304 သံမဏိနှင့် အပူလျှပ်ကာအလွှာသည် အပူထိန်းအလွှာ 304 သံမဏိတို့ဖြစ်သည်။ .
၁၁။စက်တစ်ခုလုံး၏ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု၊ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု ကောင်းမွန်ပြီး အကောင်းဆုံး emulsification စနစ်ဖြစ်သည်။
၁၂။အဆင့်မရှိသောအမြန်နှုန်းစည်းမျဉ်း၊ 6000rpm အထိမြင့်မားသောအမြန်နှုန်း၊ သင်၏ဖြတ်တောက်ထားသောလိုင်းအမြန်နှုန်း 66m/s အတွက်မြင့်မားသည်။
၁၃။သင့်အား လုံခြုံရေးအတွက် ဝန်ပိုမှုကာကွယ်မှု၊ နှစ်ထပ်အကာအကွယ်နှင့် ကာရံကာ၊
၁၄။အလုပ်ခေါင်းအား Stainless Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး GMP စံနှုန်းဖြင့် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၁၅။Equipment modular ဒီဇိုင်း၊ မည်သည့်စနစ်မဆို လိုက်လျောညီထွေ ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
SS304 သို့မဟုတ် SS316L
အတွင်းအလွှာ + ဂျာကင်အင်္ကျီ
အတွင်းအလွှာ + ဂျာကင်အင်္ကျီ + လျှပ်ကာ
လျှပ်စစ် / ရေနွေးငွေ့ အပူပေးခြင်း
အမြန်နှုန်း 0--63 rpm
manhole / Pressure manhole ကိုဖွင့်ပါ။
CIP သန့်စင်ဆေး အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး
Inlet နှင့် Outlet sanitary valve
7.Paddle Blender .(ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ)
မော်ဒယ် စွမ်းရည် Homogenizer မော်တာ နှိုးဆော်မော်တာ အရွယ်အစား MM(L*H*H)
၂၀၀ 200L3၀--၃၀၀၀ ၁.၅ ၀-၆၃
၅၀၀ 500L4၀--၃၀၀၀ ၂.၂ ၀-၆၃
၁၀၀၀ 1000L ၅.၅ ၀--၃၀၀၀4၀-၆၃
၂၀၀၀ 2000L ၇.၅ ၀--၃၀၀၀ ၅.၅ ၀-၆၃
၃၀၀၀ 3000L 11 ၀--၃၀၀၀ ၇.၅ ၀-၆၃
၅၀၀၀ 5000L 15 ၀--၃၀၀၀ 11 ၀-၆၃
တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း- ဆေးဝါး emulsion၊ ဆီမွှေး၊ ခရင်မ်၊ မျက်နှာဖုံး၊ ခရင်မ်၊ တစ်ရှူးများကို တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းကို တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း၊ ဖျော်ရည်၊ ပုံနှိပ်မင်၊ ယို
အသားအရေထိန်းခရင်မ်၊ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခရင်မ်၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ သွားတိုက်ဆေး၊ အအေးခံခရင်မ်၊ နေကာခရင်မ်၊ မျက်နှာသန့်စင်ဆေး၊ အာဟာရပျားရည်၊ ဆပ်ပြာ၊ ခေါင်းလျှော်ရည် စသဖြင့်
၂။ပမာဏ : 200L မှ 5000L အထိ
၄။အပူပေးနည်းလမ်း- လျှပ်စစ်အပူပေးခြင်းနှင့် ရေနွေးငွေ့အပူပေးခြင်း ရွေးချယ်မှု
6.အမျိုးမျိုးသော လှော်တက်ဒီဇိုင်းများသည် ကွဲပြားခြားနားမှုလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
7.သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် တောင်းဆိုချက်အရ SIP ကို ​​ရနိုင်ပါသည်။
ယခင်- ဖုန်စုပ်စက် emulsifying mixer စက် နှင့် သံမဏိ ရောစပ် တိုင်ကီ
နောက်တစ်ခု: ss tank stirrer ရောနှောပါရှိသော Homogenizer emulsifier ရောနှောခြင်း။
ဖုန်စုပ်စက် emulsifying mixer စက် stainless stee...
ss တိုင်ကီမွှေစက်နှင့်အတူ Homogenizer emulsifier ရောနှော...
Hydraumatic lifting homogenizer emulsifier mixer
Disinfectant mixer mac အတွက် Tank liquid agitator...
ခေါင်းလျှော်ရည်ရောစပ်စက်အတွက် Emulsifying Mixer...